संसदमा प्रदिप गिरिद्धारा गान्धीको चर्चा, मार्क्सवादी/माओवादीलाई मर्चा(भिडियाे सहित) - हिमाल दैनिक
निर्मलाः महिला, महिला एक नै उत्पीडित। त्यसमाथि बलत्कृत। उनकाे पिडाकाप्रति सम्बेदना राखेर बोल्नु यो आलोचना वा विरोध होइन, योे प्रतिपक्षको कर्तव्य हाे
२ आश्विन २०७५, मंगलवार १७:५३
सभामुख महोदय, समयका लागि धन्यवाद।
पछिल्लो सप्ताह म स्वयं सभामुखको कक्षमा गएर मैले विशेष समयको माग गरेको थिएँ।
मैले आफूँले बोल्न चाहेको विषयपनि उल्लेख गरेको थिएँ। मैले भनेको थिएँ, यो महात्मा गान्धीको डेढसय वर्षगाँठ हो। हामी बडो उत्साहपूर्वक कार्लमाक्र्सको दुई सयवर्ष गाँठ मनाइरहेकाछौँ। ठाउँ ठाउँमा मार्क्सवादी वामपन्थी मित्रहरुले आयोजना गरेका सभामा म पनि जाने गरेको छु। मलाई अलिकति गान्धीका बारेमा बोल्ने मौका संसदको फोरममा दिनुहोस् भनेको थिएँ। किन? गान्धीकाप्रति कुनै विशेष प्रेम भएर होइन।
मेरो स्पष्ट मान्यता के छ भने, प्रेम र आदर आफ्नो ठाउँमा छ तर, २०औँ शताब्दिमा यदि मार्क्सले गर्दा उद्देलित भयो भने २१औँ शताब्दिमा सबै समस्याको समाधान मात्र गान्धीको चिन्तनमा छ।
मार्क्सवादलाई आत्मसाथ गरेर हामीले क्रान्ति गर्यौँ भने गान्धीले जुन जुन प्रश्नमा माक्र्ससँग मतभेद राख्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले बुझ्नु परेको छ। मार्क्सवादी दर्शनलाई संक्षेपमा द्धन्द्धात्मक भौतिकवाद भनिन्छ। गान्धीसँग दर्शन थियो जसको नाम थियो अनेकान्तवाद। उनले जैन दर्शनबाट पैँचो लिएका थिए। त्यस दर्शनको मुख्य आधार के छ भने, तपाई सत्य हुन सक्नु हुन्छ, अर्को पनि सत्य हुन सक्छ। म मात्रै सत्य छु भन्ने दावी मेरो छैन। एउटा सत्यकाप्रति मेरो एकाधिपत्य छ। सत्य मेरो मनोपोली हो भन्ने विचार, अर्कोतिर होइन म आफ्नो ठाउँमा सत्य छु भने माननीय जी पनि आफ्नो ठाउँमा सत्य हुनु हुन्छ भन्ने चिन्तन हो।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको हितका लागि सर्वप्रथम हामीले हाम्रो विरोधी र उग्रविरोधी पनि कदाचित कतिपय कुरामा ठिक छ कि, सत्यको एउटै अनुहार हुँदैन, सत्यका धेरै अनुहारहरु हुन्छन् भन्ने गान्धीको विश्वास थियो। त्यो उनले जैन दर्शनबाट लिएका थिए, अनेकान्तवाद।
पूर्ववक्ता माननीयले (खगराज अधिकारी) १७ साल हुनु अघि तत्कालिन नेता कमरेड पुष्पलालले कांग्रेसको सरकारकाप्रति सदभावना देखाउनु भएको कुरा उल्लेख गर्नु भयो। कमरेड पुष्पलालसँग वनारसमा बस्दा मेरो संगत थियो। साँच्चै नै उहाँले सधैँ नै कांग्रेससँग आन्दोलन गरेर, मिलेर जाने भावना व्यक्त गर्नु हुन्थ्यो। यसमा कुनै शंका छैन।
हामी सबै कांग्रेसका युवाप्रति उहाँको सदासयता थियो। यसै मञ्चबाट म उहाँलाई र सभामुखको माध्यमबाट सरकारलाई बताउन चाहन्छुः तलमाथि भएको खण्डमा, यस संविधानलाई रक्षा गर्नु पर्ने अवस्था भएको खण्डमा, यस सरकारका विरुद्ध कुनै षडयन्त्र भएको खण्डमा सिंगो नेपाली कांग्रेस यो सरकारलाई सहि कुरामा साथ दिनेछ।
सरकारको अलवा पनि कांग्रेस पार्टीभित्र त्यस्ता मानिसहरु छन् जो नेतासँग राय बझाएर पनि सहि कुरालाई सहि भन्दै आएका छन्, त्यो मैले सम्माननीय सभामुखलाई सम्झाइ राख्नु परेन। एक होइन धेरै छन्। त्यसैले यसका बारेमा पूर्ववक्ता माननीय र सिंगो सरकार ढुक्क भए हुन्छ, नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि प्रतिक्रियावादी र षडयन्त्रकारी कदमलाई साथ दिँदैन। तर, षडयन्त्रकारी शब्द भन्नु भएको हुँदा हामीले सोच्नु परेको छ।
संविधानका बारेमा अहिले चर्चा व्यापक उठिराखेको छ। किन मधेसवादी दलहरुले साँझको चियापान बहिष्कार गर्दैछन्? अथवा किन उनीहरु कालो दिवस मनाउँदैछन्? र कांग्रेस र अन्य पार्टीभित्र पनि त्यतिबेला के कति असन्तोष थियो?
अर्को, चाहे पनि नचाहेपनि निर्मला पन्तको प्रकरणको वास्तविकता के हो? मैले गान्धीको अभ्यर्थना गदैगर्दा, गान्धीको गुणगान गर्दा, गान्धीको जन्म दिनलाई सम्झँदै गर्दा, यी दुई कुरामा मैले गान्धीवादी दृष्टिकोणबारे प्रष्ट पारिन भने त्यो गान्धीकाप्रति अन्याय हुँदै हो।
गान्धी कुनै किताबी मान्छे थिएननन्। उनीसँग कुनै प्रभावशाली डिग्री पनि थिएन। उनले जे सिकेका थिए जीवनबाट सिकेका थिए। त्यस दृष्टिले उनले पढ्ने जरुरत थिएन। माओत्से तुङ धेरै कान्छा थिए तर, माओेले सिक, सिकेर नथाक। जनताबाट सिक र जनतालाई सिकाउ भन्ने कुरा गान्धीको जीवनमा चरितार्थ हुन्थ्यो।
गान्धीले भन्ने गर्दथे, विरोधका नाउँमा विरोध गर्दै जाँदा सानो उदाहरण दिएर उनले बैद्धिक परम्पराबाट लिएको उखान थियोः कसैले तपाइको एउटा आँखा फोडेर रिसाउनु भयो भने त्यसको प्रतिकारमा उसको आँखा फोड्दा सिंगो संसार नै अन्धो हुनेछ। त्यसैले विरोधीकाप्रति पनि समझदारी र सहानुभूति राख्नु पर्दछ भन्ने कुरा हो।
तर, यस कथनले निर्मला पन्तका विलाप गरिरहेका आमा बाबुलाई चित्त बुझाउन सक्छ? त्यसकारण कानुन र इन्साफका बारेमा गान्धीले भन्न खोजेका कुराका आधारमा अहिले हाम्रा सामु उपस्थित रहेका संविधानका बारेमा म भन्न चाहन्छु। गान्धीका धेरै कमिकमजोरी थिए। त्यसमा कतिपय उज्याला पक्ष पनि थिए। सबैभन्दा उज्यालो पक्ष के थियो भने, उहाँ कानुको शासन र व्यक्तिगत सवोच्चतालाई सर्वोपरि महत्व दिनुहुन्थ्यो। गान्धीको प्रभावमा रहेर लेखिएको संविधान गान्धीले कांग्रेस पार्टीका सबैभन्दा ठूला आलोचक र उनका व्यक्तिगत विरोधी भन्न मिल्ने डाक्टर अम्बेडकरलाई भिटो लगाएर त्यसको अध्यक्ष बनाउन लगाएका थिए। पछि के भयो? धेरै प्रान्तले खासगरी तामिलनाडु र त्यहाँका तत्कालिन नेता अन्नादुराइ, पेरियारले त्यस संविधानको सपथ ग्रहण पनि गरेनन्। चुनाव लडे तर, संविधानको बहिष्कार गरे। मुस्किलले १० वर्षको दर्मियानमा उनै अन्नादुराइले संसदमा प्रस्ताव राखेर संविधानको समर्थन गर्दै ‘हामी बदलियौँ, हामीलाई जुन स्वायत्तता र स्वाधिनता दिइएको छ, जसरी हामी तामिलनाडुमा ढुक्क भएर शासन गर्दै छौँ यो संविधानबाट बाहिर जाने हाम्रो विचार छैन भनेर भनेका थिए।’ कृपया त्यो इतिहास हेर्नु होला।
तीन वर्ष भयो, संविधान जारी भएको। मधेसले खोजेको हक र अधिकारका बारेमा विभिन्न प्रकारका कुरा गरिँदैछ। राजनीति हुँदैछ। तर, एकातिर मधेसवादी अथवा मधेस समर्थकहरुले उत्ताउला कुरा गरिराखेका छन् भन्ने कसैलाई अनुभूति छ भने उनीहरुलाई र उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास सरकारले गरेको छ? जिम्मेवारी सबैको छ। प्रतिपक्षीको पनि छ, प्रत्येक सांसदको, पत्रकारको पनि छ। तर, संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारसँग छ। यस विषयमा यहाँभन्दा बढ्ता केहि भन्न चाहन्न। आज तीन वर्षपछि पनि संविधानको आलोचना ठिक ठाउँ र वेठिक ठाउँबाट ठिक र बेठिक तरिकाबाट भइरहनु अशोभनिय कुरा हो।
गान्धीको अन्तिम दिनको एउटा उद्दरण छ। उनी मर्नु भन्दा ठिक पहिले सभामुख महोदय, त्यो अचम्मको मान्छेका बारेमा सम्झना गराउन चाहन्छु। भनिन्छ, लेनिन पनि आफ्ना आखिरी दिनमा बडो भावविभहल थिए। यो सत्य हो लेनिनका आखिरी दिनका बारेमा स्टालिन, बुखारिन प्रवृतिसँगको मतभेदका बारेमा थुप्रै किताबहरु लेखिएका छन्। गान्धी पनि नेहरु र पटेको गतिविधिसँग विल्कुल असन्तुष्ट थिए। १५ अगस्ट १९४७ मा दिल्लीमा दिपावली मनाइँदै थियो। तर, उनी आज बंगलादेशमा पर्ने नुवाखली भन्ने गाउँमा विल्कुल एक्लै डुल्दै थिए। त्यतिबेला उनले डायरीमा लेखेको एउटा कागज भेटिन्छ। त्यसबेला सबैले मलाई छोडे, सबैले मलाई अन्याय गरे भन्ने क्रममा उनले भनेका छन्ः जीवनमा यस्तो धरमरको इस्यू आयो भने तिमीले के गर्ने? उनले आफ्नो डायरीमा लेखेका रहेछन् उनी मरेपछि थाहा भयो। कुनै पनि निर्णय गर्दा यस निर्णयले समाजको सर्वाधिक उत्पीडित व्यक्तिका उपर के असर पर्छ त्यो हेर्नु।
निर्मलाः महिला। महिला एक नै उत्पीडित। त्यसमाथि बलत्कृत। त्यीनको पिडाकाप्रति सम्बेदना राखेर प्रतिपक्षले बोल्नु यो आलोचना वा विरोध होइन, यो प्रतिपक्षको कर्तव्य हो। तर, प्रतिपक्षी दलको सदस्यका हैसियतले एउटा कुरा भन्न चाहन्छुः यो समस्या एक दिनको होइन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृतले खडा गरेको होइन, न त प्रधानमन्त्रीले खडा गरेको समस्या नै हो। हाम्रोे संयन्त्र कस्तो छ? जुन संयन्त्रले बारम्बार बलत्कार गराउँछ, हत्या गराउँछ तर, अगाडि कुरा बढ्दैन। हाम्रो पार्टीमा पनि बढेन होला। यहाँ पनि गान्धी भन्छन्ः समस्यालाई तत्काल हिंस्साका माध्यम, बलका माध्यमबाट जालझेल गरी समाधान गर्ने होइन। सबै सरोकार भएका पक्ष, यो प्रतिपक्षमात्र होइन, नागरिक समाज, पीडित समाज, शंकाको घेरामा परेको समाज मिलेर यसको वैकल्पिक संयन्त्र बनाउनु पर्छ, ताकि यस राज्यभन्दा पृथक होस्।
यस राज्यको चरित्र के छ सभामुख महोदय? क्रान्तिको कुरा गरी आउनु भएको ज्यान हत्केलामा राखेर लड्नु भएको मानिस। सत्ताको हस्तान्तरण त भयो तर, सत्ताको रुपान्तरण भएको छैन।
नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा मेरो पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री भएका पालामा सामान्य विरोध भएको बेलामा माओवादीका नाममा अगाडि बढिरहेका विद्यार्थी र युवकलाई जसरी बर्बर ढंगले अत्याचार गरियो त्यो नगरिएको भए सायद देश यत्रो रक्तपातमा जाने थिएन। के त्यो तन्त्र हामीले बदल्न सकेका छौँ? त्यो तन्त्रलाई बदल्ने इच्छाशक्ति सरकारको यदि छ भने प्रतिपक्षका मानिससँग सार्थक सम्वाद गरेर, नागरिकसमाजसँग सार्थक सम्वाद गरेर यो सढेगलेको तन्त्रको ठाउँमा साच्चै नै बलत्कृतलाई न्याय दिन सकिने, सुरक्षा दिन सक्ने निकाय बनाउँ। क्रान्तिको इतिहास सबैले पढेका छन्। म भन्दा बढि विद्धान माक्र्सवादी साथीहरुले पढ्नु भएको छ। मैले गान्धीको उल्लेख गरेँ।
गान्धीले विकासको यो मोडललाई पनि शंका गरेका छन्। विकासको यो मोडल मै खाउँ, मैलाउँ भन्ने मोडलले कहिल्यै पनि समाजवादको कुरा छोडिदिनुहोस् कल्याणकारी राज्य पनि बनाउन सक्नु हुँदैन।
Prevपछिल्लोपूर्वाधार बिकास निर्माणमा भ्रष्टाचार मौलाएको नेता नेपालको आरोप(भिडियो सहित )
अघिल्लोनिर्माण व्यबसायी क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटलाई तोड्नको लागि म मैदानमा आएको हुँ: अध्यक्षका उम्मेदवार सिंहNext